अखबारमा अाज – Halkaro
#JagarkotTragedy छोराले पेन्सिल ल्याइदिनु भन्थ्यो, कहिल्यै नफर्किने गरी गयो
प्रकाशित मिति : २०७५, २१ श्रावण सोमबार
काठमाडौँ ।‘आफू पढ्न नसके पनि छोरालाई धेरै पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना थियो तर दैवले चुडेर लग्यो’, प्रेमले भावविह्ल हुँदै भने, ‘छोराले पेन्सिल ल्याइदिनु बुबा भनेको थियो। अब कहिलै नफर्कने गरी गयो।’ छोराको शोकमा प्रेमकी श्रीमती पटक–पटक मुर्छा पर्दै होसमा फर्किएकी छिन्। स्थानीय एक निजी विद्यालयको चार कक्षामा पढ्ने १३ वर्षीय नरेन्द्र परियार नजिकै रहेको […]
मन्त्रीहरूको कार्यमुल्यांकनः रेड जोनमा यी दुर्इ मन्त्री
प्रकाशित मिति : २०७५, १३ श्रावण आईतवार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनको सचिवालयले अहिले मन्त्रीहरुको मूल्यांकन गरिरहेको छ । मन्त्रीहरुले गरेको कामको अवस्थालाई हेरेर रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रिन जोनमा मन्त्रीहरुको वर्गीकरण गरिएको छ । रेड जोन अर्थात जोखिमको सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित छन् । […]
प्रकाशित मिति : २०७५, ११ श्रावण शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारलाई वषौंदेखि टाउको दुखाइको विषय बनेको विद्यालय तहका अस्थायी शिक्षकको समस्या यस वर्षदेखि पूर्ण रुपमा समाधान हुने भएको छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भएसँगै विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तर उकासिने शिक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ । अहिले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी १ लाख ७ हजार छ । यसमध्ये करिब ७० हजार शिक्षक मात्र दरबन्दीमा […]
पानीजहाज चढ्न प्रधानमन्त्रीको निम्तो तर अध्ययनसमेत छैन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँने घोषणा गरिसकेका छन् । तर पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार यो प्रोजेक्ट कुन मन्त्रालय मातहत अघि बढाउने भन्नेमा नै अन्योल छ । पानीजहाजबारे ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार र वाणिज्य तथा […]
संसदले दाताको सहयोग नलिने
काठमाडौँ । संसद् सचिवालयले सरकारबाहेक कसैसँग आर्थिक सहयोग लेनदेनको सम्झौता नगर्ने भएको छ । सांसदलाई तालिम दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोग लिएकोमा विरोध भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारको बजेट मात्रै लिने घोषणा गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ । संसदमा ०६४ यता दातृ निकायको प्रवेश भएको थियो । कार्पेट पर्दादेखि सांसदले बोल्ने माइकसमेत दाताकै सहयोगमा […]
बूढीगण्डकी फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी
काठमाडौ । सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने संकेत गरेको छ । कारोबार दैनिकका अनुसार, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई हतारको निर्णयको संज्ञा दिँदै यसमा पुनरावलोकन हुने जानकारी दिएका छन् । उनले सरकारले यसमा पुनरावलोकन गरिरहेको र चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिने बताए । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो […]
आफैंले ल्याएको अध्यादेशविपरीत सम्बन्धन दिने तयारीमा शिक्षामन्त्री
प्रकाशित मिति : २०७५, १९ असार मंगलवार
काठमाडौँ। सरकारले विद्मान चिकित्सा शिक्षा अध्यदेश विपरित मेडिकल कलेजहरूलार्इ सम्वन्धन दिने तयारी थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यस अगाडि आफैंले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी अध्यादेशविपरीत स्वास्थ्य शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रयास थालेका छन् । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसउार चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धत तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने गरी अध्यादेश […]
गैससको सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्रीको दबाव, पछि हट्यो गृह
प्रकाशित मिति : २०७५, १७ असार आईतवार
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबावमा गैरसरकारी संघ–संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा त्यसका सञ्चालक–पदाधिकारीको चलअचल सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब दिएपछि गृह पछि हटेको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै कारोबार दैनिकले समाचार लेखेको छ । गत जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला […]
साँझ ५ बजेटबाट धन्दा शुरु, बिहान ८ बजे हिसाब क्लियर
प्रकाशित मिति : २०७५, १६ असार शनिबार
काठमाडौँ । रसिया विश्वकपका खेलअनुसार नेपालमा समेत दैनिक अर्बभन्दा धेरैको बाजी लाग्ने गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, धरान, वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता सहरमा करोडौंको बाजी लाग्ने गरेको हो । काठमाडौंमा त टोलटोलमा सट्टेवाजको जालो पुगेको प्रहरी बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार सट्टेबाजको धन्दा साँझ ५ बजेबाट शुरु हुन्छ र रातभर चल्छ । बिहान ८ बजेसम्म हिसाब […]
सर्वोच्चको अादेश नमान्ने सरकार !
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते थापाथली प्रसुतिगृह छेउको पाञयनघाटदेखि बागमति किनारमा कानुन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नु र अनभिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न गराउन नदिनु भन्दै अादेश दियो। धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको स्थान संरक्षण गर्न सरकारलार्इ सर्वोच्चको आदेश थियो । स्थानीय प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो […]